अरुको उपचार गर्दा जो संक्रमित भए…. – मोफसल खबर
Home Featured, समाचार अरुको उपचार गर्दा जो संक्रमित भए….
अरुको उपचार गर्दा जो संक्रमित भए….
Posted on २०७८, १८ जेष्ठ मंगलवार १८:०३
स्वास्थ्यकर्मी प्रमोद पौडेल शिवराज आधारभूत अस्पतालमा कार्यरत छन् । कोरोना अस्पतालको रुपमा निर्माण गरिएको अस्पताल अहिले आइसुलेशनको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसै आइसुलेशनमा कार्यारत पौडेल कोरोना संक्रमित भएको दश दिन पुग्यो । कोरोना सङ्क्रमितहरुको उपचार गर्दागर्दै सङ्क्रमित भएका पौडेल अहिले होम आइसुलेशनमा छन् । सङ्क्रमितकै उपचार गरिरहेका पौडेल अहिले आफ्नै उपचार गरिरहेका छन् ।
यती मात्र हैन पौडेलले कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनमा समेत खटेका थिए । आइसुलेशनमा मृत्यु भएकाहरुको शवलाई जिम्मेवारी पूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेको पौडेललाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको शिवराज नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत चूडामणि भट्टराईले बताउनुभयो ।अहिले सम्म यस अस्पतालमा मृत्यु भएका ६ जना सङ्क्रमितको शवलाई स्वास्थ्यकर्मीले व्यवस्थापन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणको कोरोना महामारी बाट थलिएका सङ्क्रमितहरुको सेवामा निरन्तर खटि रहँदा अन्ततः आफू सङ्क्रमित भएको पौडेलले बताए । लक्षण सहितको कोरोना सङ्क्रमण ले सुरुवाती दिनहरूमा ज्यान दुख्ने, कमजोरी पन, छातीको दुखाइ,टाउको को दुखाइ, ज्वरो आउने, केही हद सम्म श्वासप्रश्वास मा समस्या, स्वाद र नाक को गन्ध गुम्ने जस्ता समस्याले निकै सताएको उनको अनुभव छ । पौडेलको परिवारका थप तीन जना संक्रमित रहेका छन् । उनकी श्रीमती कोरोना अस्पतालमा उपचाररत छिन भने भाउजू र नौ महिने छोरी सङ्क्रमित भएर होम आइसुलेशनमा रहेका छन् । “अहिले जनस्वास्थ्य का मापदण्ड पालना गर्दै म होम आइसोलेसन बसिरहेको छु, पौडेलले भने, “आज १० दिन सम्म आइपुग्दा आफ्नो उच्च मनोबल को कारण यो महामारीलाई परास्त गरेको महसुस भएको छ,।”
शिवपुर स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्थ्यकर्मी भुवन थापा मृत्युको मुख वाट बाचेको बताउँछन् ।स्वाब सङ्कलन गर्ने क्रममा आफू सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । चन्द्रौटामा रहेको कोरोना अस्पतालले रिफर गरी उनलाई भैरहवामा आइसियु ८ दिन उपचार गरिएको थियो । थापाले १७ दिनमा कोरोनालाई जितेका हुन र अहिले घरमा आराम गरिरहेका छन् ।
थापा सगै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी दान बहादुर हमाल पनि उनि सगै सङ्क्रमित भए । “हिजोसम्म अरुलाई बचाउन खोज्ने हामी दुबै जना आफै मृत्युलाई जित्न संघर्ष ग¥यौं,थापा भन्छन्, “बेडको सिरानी तिर औषधी चाङ लगाउदै हातका शिराहरु क्यानुलाको डोबहरुले छियाछिया पार्दै कृत्रिम अक्सिजनको सहायताले बाच्ने झिनो आस बोकेर अस्पतालको सैयामा मृत्युुसंगको भिषण यद्ध गरी जित्यौ,।”अहिले सम्म शिवराज नगरपालिकामा कार्यरत ७ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन् । ६ जना निको भएको र पौडेल होम आइसुलेशनमा रहेको जनाइएको छ ।